I-Disneyland eParis ibeka indawo yokwamkela
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eFrance » I-Disneyland eParis ibeka indawo yokwamkela
Disneyland eParis ivulwa kwakhona
IDisneyland Paris ibhengeze ukuba izakuvulwa kwakhona nge-17 kaJuni 2021, kunye neDisneyland Park, iWalt Disney Studios Park, iDisney's Newport Bay Club kunye neDisney Village.
I-Disneyland Paris ivaliwe ngo-Matshi ophelileyo ngo-2020 xa ubhubhane wabetha, wavula ngoJulayi waphinda wavalwa ngo-Okthobha.
Ekuqaleni yayicwangcise ukuvulwa kwakhona ngoFebruwari walo nyaka kodwa emva koko yabhengeza umhla wokuvula kwakhona ka-Epreli 2 owathi waphinda wandlalwa.
Zonke iindwendwe ezineminyaka emi-6 nangaphezulu, amalungu afakiweyo, kunye nababoneleli ngeenkonzo kufuneka banxibe imaski.
Ukuvulwa kwakhona kweDisneyland Paris kuya kulandela amanyathelo ezempilo nokhuseleko. Ukuze uhloniphe ukubekwa kude emzimbeni okucetyiswayo ngabasemagunyeni bezempilo, inani eliqingqiweyo lokungena kwiipaki zeDisney ziyafumaneka mihla le. Ukongeza, zonke iindwendwe ezineminyaka emi-6 nangaphezulu, amalungu afakiweyo, kunye nabanikezeli beenkonzo kufuneka banxibe imaski.
At Disneyland ParisNgokuhambelana nesikhokelo esivela kurhulumente wase-France kunye nabasemagunyeni kwezempilo, ukushenxiswa komzimba kuyakwenziwa kuyo yonke indawo yokuphumla emigceni, ukukhwela izithuthi, iivenkile, iihotele, iivenkile zokutyela, kunye nezinye izibonelelo, kwaye imiqondiso iya kuboniswa njengesikhumbuzo.
Ipaki yaseFrance icela iindwendwe zayo ukuba zithathe inxaxheba kuvavanyo lwempilo yokuzithandela ngaphambi kokundwendwela iDisneyland Paris. Iinkcukacha zokuzihlola zibandakanya oku kulandelayo.
Ngokundwendwela iDisneyland Paris, iindwendwe ziqinisekisa ukuba azinazo naziphi na iimpawu ze-COVID-19, kubandakanya umkhuhlane (ngaphezulu kwama-38 degrees Celsius) okanye ukugodola, ukukhohlela, ukuphefumla kancinci okanye ukuphefumla nzima, ukudinwa, izihlunu okanye iintlungu zomzimba, intloko ebuhlungu, entsha Ukuphulukana nokungcamla okanye ivumba, umqala obuhlungu, isicaphucaphu okanye ukugabha, okanye urhudo.
I-SUNx Malta isungule uhambo lwemozulu enobuhlobo kwiZero